အချစ်ဦးက မူကြိုကျောင်းတုန်းကပေါ့။ "အခဲမိ"လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေးပါ။းD ကြိုက်နေတာကို သူများတွေ သိမှာစိုးလို့ ကောင်မလေး တခြားနေရာ သွားနေတဲ့အခါမျိုးမှာ "ဒီကောင်မလေး နဲနဲမှ ချစ်စရာမကောင်းဘူး"လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ပြိုင်ဖက်တွေ ပေါ်လာမှာ ကြောက်လို့များလား မသိတော့ပါဘူး? တော်တော် အကျင့်ဆိုးတဲ့ ကလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ထင်တယ်။းD
ဒါပေမယ့် တွေးကြည့်လိုက်ရင် ကျနော် ကြိုက်မိတဲ့ ကောင်မလေးကို သူငယ်ချင်းတွေ သိမှာစိုးလို့ အဲလိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိထားမိတယ်။ ကျောင်းသားဘဝတုန်းက သူငယ်ချင်းအိမ်မှာစုပြီး ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုး ပြောခဲ့ဖူးတယ်ဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တယောက်ဘဲ ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးရှိလည်း "မရှိဘူး"လို့ လိမ်ပြောခဲ့တယ်။
"ဒီကောင်မလေးကို ကြိုက်တယ်ကွာ"လို့ ပြောတဲ့ သူလည်း ရှိပေမယ့် ဒါဟာ ကောက်ကျစ်တာလို့ တွေးမိတယ်။ တဖက်သတ်ကြီး ကောင်မလေးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသလို ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား။ တကယ်လို့ သူနဲ့အပြိုင် အဲဒီကောင်မလေးကို ကြိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် "သူငယ်ချင်းက ဒီကောင်မလေးကို ကြိုက်တယ်လို့ပြောထားတာကြီးဆိုတော့ ငါလည်း ကြိုက်တယ်လို့ မပြောရဲတော့ဘူး"လို့ တွေးပြီး ဘာမှမစခင် အဲဒီကောင်မလေးက ကိုယ့်အတွေးထဲက ချစ်သူဖြစ်လာဖို့ကနေ လွဲချော်သွားမှာလေ။ ဒါမျိုးကို မကြိုက်တာမို့ ဖွင့်မပြောဖြစ်တာလား မသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျနော်က ဘာလို့လဲမသိ ကံကောင်းတယ် ပြောရမယ်။ ပထမဦးဆုံး ဗယ်လင်တိုင်းချော့ကလက်ကို အချစ်ဦးဖြစ်တဲ့ "အခဲမိ"ဆီက ရခဲ့တယ်။ အဲဒါက မူလတန်း တတိယနှစ် ကျောင်းသားဘဝတုန်းကပါ။ ဘာပြန်ပေးရမလဲ မသိလို့ အမေ့ကို ဘီစကစ် မှာလိုက်ပြီး ဘီစကစ်နဲ့အတူ စာကို ပေးဖြစ်လိုက်ခဲ့တယ်။ "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း ကြိုက်ပါတယ်"ဆိုတာမျိုး ရေးပေးလိုက်တယ်ထင်တယ်။
တစိမ်းတယောက်ကို ကြိုက်တယ်လို့ ရေးပေးဖြစ်တာ အဲဒါက ပထမဦးဆုံးပါ။ ကျနော့အနေနဲ့ ဘဝမှာ ပထမဦးဆုံး ရည်းစားစာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
'တာ့တာ'လို့ လက်ပြနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာ 'နောက်တွေ့တာပေါ့နော်'လို့ တိုးတိုးသာသာလေးပြောတတ်တဲ့ နင့်ကို အရမ်း~ အရမ်း~ အရမ်း~ အရမ်းချစ်နေမိတာကို ကိုယ့်ဘာသာ သတိထားမိတယ်။ ခွဲနေရတဲ့အချိန်ထက် ခွဲခွါရတော့မယ့်အချိန်လေးမှာ ငါ နင့်ကိုချစ်မိတဲ့ အချစ်တွေ မြတ်နိုးရတာတွေကို ပိုပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားရတယ်။ ချစ်တယ် အရမ်းချစ်တယ်ဟာ...
နှစ်ရှည်လများ ချစ်လာခဲ့တဲ့ ချစ်သူအတွက် ကျနော် ရည်းစားစာ ရေးပါမယ်။ စာထဲက အကြောင်းအရာက တကယ့်ကို သာမန်ရိုးရိုး နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်တွေပါ။ ဒီနေ့ အတူလမ်းလျှောက်ထွက်ရတာ ပျော်လိုက်တာတို့၊ မင်းလေးလက်ရာ ထမင်းဟင်းတွေ စားလို့ကောင်းလိုက်တာတို့၊ နောက်တကြိမ် အဲဒီကို အတူသွားကြစို့တို့၊ မင်းလေးနဲ့ အတူရှိနေတဲ့နေ့တွေက စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာတို့ စတာတွေကို ခပ်တိုတိုစာသားတွေနဲ့ ရေးတယ်။ ကျနော့အတွက် ရည်းစားစာဆိုတာ အချစ်တွေကို သိစေဖို့ နည်းလမ်းပါ။
အရမ်းကို စာရေးချင်စိတ်ဖြစ်တာက ချစ်သူနဲ့ တွေ့ပြီး ခွဲရတဲ့အချိန်။ 'အင်း... နောက်တွေ့တာပေါ့နော်'လို့ နှုတ်ဆက်ပြီး ခွဲလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် စာရေးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ဖြစ်လာလို့ ချက်ချင်း mail ပို့တာတွေ၊ FAXနဲ့ စကားလုံးတွေ ပုံလေးတွေ ပို့တာမျိုး လုပ်မိတယ်။ စာရေးပြီး ချိပ်ပိတ်ပြီး လိပ်စာမရေးဘဲ နောက်တကြိမ် ချစ်သူနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ သူမမသိအောင် handbagထဲ တိတ်တိတ်လေး ထိုးထဲ့ထားလိုက်တယ်.... အတော်အေးတိအေးစက် နိုင်တယ်နော်။:D
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တကယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီးပြီဘဲဆိုပြီး ရည်းစားစာ ရေးမပေးတော့တာမျိုးကတော့ တဖြည်းဖြည်း အနမ်းမပေးချင်တော့တာမျိုးနဲ့ တူလာတယ်လို့ ထင်တယ်။ ကျနော်က "အချစ်"ကို ကျင့်သားရလာတာမျိုးတွေ ရေသာခိုလာတာမျိုးတွေ မလုပ်ချင်ဘူး။
တကြိမ်လက်ဝယ်ရပြီးပြီဆိုပြီး ဒီအတိုင်းနဲ့ ပြီးသွားရောလား? အဲလိုမဖြစ်သင့်ဘူး မဟုတ်လား။ ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာ အတူတူ စချစ်ကြတဲ့အချိန်က ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်လို့ ကျနော်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ယုံကြည်တဲ့အတွက် ချစ်သူကို သေသေချာချာ အနမ်းပေးတာ၊ သေသေချာချာ ရည်းစားစာ ရေးပေးတာမျိုး ဖြစ်ချင်မိတယ်။ သေချာတာပေါ့! စချစ်တဲ့ အချိန်လောက်လေးမဟုတ်ဘဲ နှစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ ဒီလိုမျိုး လုပ်သွားချင်တယ်။
လက်ထပ်ပြီး နေ့ရက်နှစ်လတွေ ကုန်လွန်တဲ့တိုင် ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်ရသူအိမ်ထောင်ဖက်ကို မပျက်မကွက် ရည်းစားစာ ရေးပေးနေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ဂန္ထဝင်မြောက်တဲ့ ချစ်ချင်းပါပဲ။
"ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါလိမ့်! ဒီလောက် အတူတူရှိနေတာတောင်၊ ဒီနေ့တောင် အတူတူရှိနေရဲ့သားနဲ့၊ မနက်ဖြန် တွေ့ရမယ်ဆိုတာကို တွေးမိလိုက်ရင် ရင်တုန်လာပြီး နေလို့ထိုင်လို့ကို မရချင်တော့ဘူး.... ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါလိမ့်!!!"
ထာဝရအမြဲ ချစ်ရသူအတွက် စာသဝဏ်
ဒါက ကျနော် "ဖူကူအိုကာ"မှာ တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်းက အကြောင်းပါ။ အတော်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးက သူတဖက်ချစ်နေရသူကို ဖွင့်ပြောရကောင်းနိုး ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘဲ ခံစားနေရတုန်းကပေါ့။ အဲဒါကို သိပ်စကားများတဲ့ ယောက်ျားလေးတယောက်က အဲဒီမိန်းကလေးကို "ဘာဖြစ်ဖြစ် ပထမဆုံး ဖွင့်ပြောလိုက်။ အဲလိုဆို ပြန်လက်ခံတာဖြစ်ဖြစ်၊ မပြောကောင်း မဆိုကောင်း အငြင်းခံရတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာဖြစ်ဖြစ်လေ စိတ်ထဲ ပေါ့သွားမှာပေါ့" လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဒါကိုကြားပြီး ကျနော်က အရူးလားလို့ ထင်လိုက်မိတယ်။ ကြိတ်ဆွေးနေ ပူလောင်ခံစားနေရတဲ့ တဖက်သတ်အချစ်စိတ်ကို 'စိတ်ပေါ့ပါးသွားဖို့အတွက်နဲ့' ဖွင့်ပြောလိုက်တာမျိုး မဟုတ်ဘူးလေ၊ 'ပြန်ချစ်စေချင်လို့' ဖွင့်ပြောရတာ မဟုတ်လား။ အဲဒီကောင်က သူ့အတွေးနဲ့ မိန်းကလေးကို လျှောက်လုပ်ခိုင်းပြီး တကယ်တော့ သူကိုယ်တိုင် စိတ်ပေါ့ပါးချင်တာမျိုးလို့ ထင်မိတယ်။
ချစ်သဝဏ်လွှာလည်း အတူတူဘဲ။ စိတ်ပေါ့ပါးစေရုံသက်သက် ပေးတာမျိုးက မဟုတ်သေးဘူး။ ချစ်လို့ အသိပေးရုံလောက်နဲ့ မဖြစ်သင့်ဘူး၊ တကယ့်ကို နှစ်နှစ်ကာကာချစ်မိလို့ ပြန်ချစ်စေချင်လို့ ပေးရတာမျိုးလေ။
ဒါနဲ့ "ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါလိမ့်!!!"ဆိုတဲ့ စာဆိုရင် တဖက်သတ်အချစ်နဲ့ ကြိတ်ခံစားနေရတာကို ဖွင့်မပြောခင်လိုမျိုး ဖတ်ရတယ် မယ်ဟုတ်လား။ တကယ်တော့ ဒါဟာ တော်တော်ကြာကြာ ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးသား သူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ ရေးထားတာပါ။
ဥပမာ ကြာရှည်ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာပြီးပေမယ့်လည်း အဲလို အမြဲတမ်း တဖက်သတ်အချစ်လို ခံစားချက်နဲ့ ရင်ခုန်တာတွေ၊ လွမ်းရတာတွေ၊ တွေ့ချင်စိတ်ပြင်းပြင်းပျပျဖြစ်တာတွေ စတဲ့ ခံစားမှုမျိုးနဲ့ ချစ်သဝဏ်လွှာကို ရေးမယ်ဆိုရင် ဒီအချစ်ဟာ ကြိမ်းသေ အကြာကြီး အဓွန့်ရှည်မှာလို့ ကျနော်ကတော့ ယုံကြည်တယ်။
"ချစ်တယ်" ... နင်က ဒီစကားလုံးကို ငြီးငွေ့သွားမှာစိုးလို့ ရင်ထဲမှာဘဲ ငါလေ အဲဒီစကားကို အကြိမ်ကြိမ် ပြောနေမိတယ် ... "ချစ်တယ် .... ချစ်တယ်"... တကယ်တော့ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ငါဖွင့်ပြောချင်တာကို ကြိတ်မှိတ်ပြီးနေခဲ့တာ။ ဒါကြောင့် နင် အရင် အိပ်ချင်လာပြီး ငိုက်မျဉ်းနေတဲ့အခါကျမှ ငါက ဒီစကားကို ပြောဖြစ်တယ်... "ချစ်တယ် ..... သိလား.... ချစ်တယ်ဆို..." ငါလေ နားရွက်နားကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး အကြိမ်ကြိမ်ပြောမိတယ်.... "ချစ်တယ်.... ချစ်တယ်"...
Posted by မြရွက်ဝေ at 3:24 PM
တကယ့်ကို ဖတ်လို့ကောင်းတယ်.. ဖွဲ့စည်းပုံထူးဆန်းနေသေးတယ်.. ကလေးသဘာဝ အချစ်ဋီကာ ဖွင့်တာတွေ အသေအချာ ဖတ်တယ်.. ကျေးဇူးပဲ..
ညာဖက်ဘေးက စတေးတပ်အရ လွမ်းနေတယ်ပေါ့လေ